प्रति-क्लिक मार्केटिंग भनेको के हो? प्रमुख तथ्याistics्कहरू समावेश गरियो! | Martech Zone
प्रति-क्लिक मार्केटिंग भनेको के हो? प्रमुख तथ्याistics्कहरू समावेश गरियो!
सोमवार, जुन 3, 2019 सोमवार, जुन 3, 2019 Douglas Karr
एउटा प्रश्न जुन म अझै परिपक्व ब्यापार मालिकहरू द्वारा सोध्छु हो कि तिनीहरूले प्रति क्लिक भुक्तान (पीपीसी) मार्केटिंग गर्नु पर्छ कि हुँदैन। यो साधारण हो वा कुनै प्रश्न होईन। पीपीसीले खोजी, सामाजिक, र वेबसाइटहरूमा दर्शकहरूको अगाडि विज्ञापनहरू धकेल्ने एक अद्भुत अवसर प्रदान गर्दछ जुन तपाईं जैविक विधिहरू मार्फत साधारणतया पुग्न सक्नुहुन्न।
प्रति क्लिक मार्केटिंग भनेको के हो?
पीपीसी अनलाइन विज्ञापनको एक विधि हो जहाँ विज्ञापनदाताले प्रत्येक पटक आफ्नो विज्ञापन क्लिक गरेकोमा शुल्क तिर्दछ। किनभने यसको लागि एक प्रयोगकर्तालाई वास्तवमा कार्य गर्न आवश्यक छ, विज्ञापनको यो विधि धेरै लोकप्रिय छ। बजारहरूले पीपीसी अवसरहरू खोज ईन्जिनहरू, सोशल मिडिया, र विज्ञापन नेटवर्कको अधिकतामा फेला पार्न सक्दछन्। परम्परागत विज्ञापनहरू भन्दा फरक जुन सीपीएम चार्ज गरिन्छ (प्रति हजार प्रभाव प्रति लागत), पीपीसी सीपीसी (प्रति क्लिक लागत) को साथ चार्ज गर्दछ। CTR (क्लिक-थ्रु दर) एक प्रतिशत छ कि कति पटक प्रयोगकर्ता क्लिक बनाम पीपीसी विज्ञापन हेर्नुहोस्।
के तपाईंले पीपीसी गर्नुपर्छ? ठिक छ, मैले फाउन्डेशनल राख्न सिफारिश गर्दछु सामग्री पुस्तकालय र वेबसाइट सबै घण्टी र सिटीहरु संग तपाईं विज्ञापन मा एक टन पैसा खर्च गर्नु अघि। एक अपवाद, अवश्य हो, यदि तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न कुन सामग्रीले रूपान्तरणको उत्पादन गर्दछ। कुञ्जी शब्द संयोजनहरू र पीपीसीमा विज्ञापन प्रतिलिपिको परीक्षणले तपाईंलाई सामग्री बजारमा खर्च गरेको एक टन पैसा र समय बचत गर्न सक्दछ यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने।
म सामान्यतया ग्राहकहरूलाई बेसलाइन साइट, सामग्रीको एक पुस्तकालय, केही उत्कृष्ट अवतरण पृष्ठहरू, र एक ईमेल प्रोग्राम प्राप्त गर्न सल्लाह दिन्छु ... त्यसपछि तपाईंको समग्र डिजिटल मार्केटिंग रणनीति बढाउन पीपीसी प्रयोग गर्नुहोस्। अधिक समय, तपाईं आफ्नो कार्बनिक सिसा निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ र पीपीसी थोरै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईंलाई सिसा चाहिन्छ।
बाट यो इन्फोग्राफिक SERPwatch.io, २०१ Pay मा भुक्तान-प्रति-क्लिकको राज्य, PPC उद्योग को बारे मा जानकारी को एक टन प्रदान गर्दछ, कसरी क्षेत्रहरु प्रदर्शन, र सम्बन्धित तथ्यांक को एक पहाड सामेल।
२०१ PP को लागि कुञ्जी पीपीसी तथ्या .्क
गत वर्ष, गुगल खोजी विज्ञापन खर्च २%% बढ्यो, किनमेल विज्ञापन खर्च %२%, र पाठ विज्ञापन खर्च १ 32% ले वृद्धि भयो।
वरिपरि Small 45% सानो व्यवसाय सक्रिय रूपमा आफ्नो सञ्चालन बढाउनको लागि पीपीसीमा लगानी गर्दैछन्।
गुगल अनुसन्धान अनुसार, खोज विज्ञापन गर्न सक्दछ ब्रान्ड जागरूकता बढावा 80% द्वारा।
प्रायोजित विज्ञापनहरू लिन्छन् Out मध्ये २ क्लिकहरू गुगलको पहिलो पृष्ठमा।
गुगल प्रदर्शन अभियानहरु भन्दा बढि पुग्छ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको 90 ०% विश्वव्यापी रूपमा।
अचम्मको कुरा, सबै ग्राहकहरूको 65 XNUMX% एक निश्चित उत्पाद द्वारा एक लिंक को माध्यम मा क्लिक गर्नुहोस्।
भुक्तान गरिएको खोज परिणामहरूको औसतमा परिणाम हुन्छ १. times गुणा रूपान्तरण दर जैविक खोज परिणामहरूको।
2017 मा, मोबाइल उपकरणहरू गुगल खोज विज्ञापन क्लिकको% 55% उत्पादन गरियो।
मोबाइल खोजी गर्नेहरूको 70०% कल गुगल खोजीबाट सिधा एक व्यवसाय।
यो औसत क्लिक-थ्रु दर खोज नेटवर्कमा 3.17.१XNUMX% छ। को लागि औसत CTR शीर्ष भुक्तानी परिणाम %% छ!
निश्चित गर्नुहोस् कि पूरा इन्फोग्राफिक 80० भन्दा बढी अन्य तथ्या !्कहरूको लागि जाँच गर्नुहोस्।
टैग: प्रति क्लिक लागतctrppc विज्ञापनलाई कसरी दर्जा दिइन्छभुक्तान गरिएको खोजीसामाजिक विज्ञापन तिर्नेप्रति क्लिक भुक्तानी गर्नुहोस्पीपीसीppc मार्केटिंगसर्पवाच
PERIODS: तपाईंको घर वा ल्यान्डि Page पृष्ठलाई यी Pie टुक्रा सामग्रीको साथ अधिकतम बनाउनुहोस्